.....@MZ.org email — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited March 2010 in Project
MZ မှာ တည်းတံ့ email account လေးလုပ်စေချင်ပါတယ်...:77:
ုိအလင်းရောင် ဖိုရမ်[FONT=andale mono,times] တို့ မြန်မာမိသားစု[/FONT]ဖိုရမ်[FONT=andale mono,times] တို့[/FONT][FONT=andale mono,times] [/FONT] လိုမျိုး ........@alinyaung.org [FONT=andale mono,times]တို့[/FONT][FONT=andale mono,times] [/FONT] [FONT=andale mono,times][email protected] ဆိုပြီးလုပ်ထားတာတွေ့လို့ပါ...သူတို့စီမှာ member တွေက [/FONT]တည်းတံ့ email account လေးလုပ်လို့ရပါတယ် (member တစ်ယောက်ကို storage memory 6G အထိရတယ်ဗျို့)
MZ မှာလည်းလုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် member အချင်းချင်းမေးစရာတို့ ပြောစရာတို့ရှိရင် private account ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူး..:68:
အပြင်ကဘော်ဘော်တွေနဲ့လည်း မရောတော့ဘူး ..ဒါဆိုemail လည်းလူမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့့:67:
MZForums က User မှန်းသိတာပေါ့နော်
ရပါတယ် အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ပေးနေတာပါ။ တောင်းတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကိုပေးပါတယ်။ Storage ကတော့
7 GB လေ အခုတော့ နောက်များလာမှာပေါ့ ဒါထက်။
ဘယ်လိုတောင်းရင် ရ နိုင်ဘာလဲ
[email protected] ဆိုပီးတော့ရနိုင်မှာလား
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ အစ်ကိုလိုချင်ရင် [email protected] ဆိုပြီးရမှာပါ။
မေးလ်စစ်ချင်ရင် http://www.google.com/a/mysteryzillion.com ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီး login ဝင်ရပါမယ်။ အစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် စည်သူ့ဆီမှာလှမ်းတောင်းပါ။ သူလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အနော် လည်း တစ်ခုလိုချင်တယ်ဗျာ....:D:D:D
့htinyarsai ဆိုတဲ့ nick နဲ့
[email protected] နဲ့
me too.. I also want an account. Is it OK? \_:D/
လိုချင်တယ် ဆိုသူများ ဖြစ်နိုင်ရင် နံမည်လေးတော့ပေးခဲ့ပါဗျာ။ အဲဒါမှ လုပ်ပေးတဲ့ စည်သူလဲ လွယ်လွယ်လုပ်ပေးလို့ရမှာပေါ့။ အခုတော့ လုပ်ပေးပါဆိုပြီးဘာနံမည်မှလဲမပေး :2: နံမည်ပါစဉ်းစားပေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ mz မှာပေးထားတဲ့နံမည်နဲ့ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ဒီနံမည်လေးနဲ့လိုချင်ပါတယ်ဆို ကောင်းဘူးလားဗျာ နော့ :67:
ကျွန်တော်nick ကတော့ [email protected] ပါ[email protected] ကို add ခဲ့သူများ.......Mz mail ကိုလာကြပါလို ့....
ကျွန်တော်လည်း [email protected] ဆိုတဲ့ နာမည်းလေးနဲ့ တစ်ခုလောက်လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
[email protected] နဲ့လိုချင်ပါတယ်
plz.......... one account for me.
my nick is mmkyioo...
ကျနော် လည်း ၁ ခု ..
KO Se tu..
Can you do for me one a/c
sername : [email protected]
default password.. is 123456
ကျွန်တော်ဆရာဝင်လုပ်လိုက်ဦးမယ် :P အခု မေးလ်လုပ်ချင်တဲ့သူများ gmail လေးပါပေးခဲ့ရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒါမှ သူလုပ်ပြီးသွားရင် မေးလ်နဲ့လှမ်းအကြောင်းကြားလို့ရမှာလေ။ PM ပို့လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့်။ ဦးစည်သူကြီးက သိပ်မအားတော့ PM ပို့ရခက်မှာစိုးလို့ပါ :P
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာဝင်လုပ်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာ သူလဲအဆင်ပြေ ကိုယ်လဲအဆင်ပြေပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား :103:
ကျွန်တော့်ကိုတော့ [email protected] လေးလုပ်ပါဦး။ တလက်စတည်းမေးပါရစေ. အဲ့ဒီမေးလ်ထဲကို ပို့စ် အသစ်များရောက်တိုင်း Deliver လုပ်ထားလို့ရမလား။ မေးတာနော်။
အစ်ကို noor ရေ အဲလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ခြင်းပြောကြည့်မယ်နော်။
[email protected] မေးလ်ရသွားပြီးဆိုရင်...အစ်ကိုအရင်ဆုံး User CP အောက်က Edit Email & Password မှာ အစ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ မေးလ် [email protected] ကိုအရင်ပြောင်းပါ။ အဲဒါပြီးပြီဆိုရင် Edit Options ထဲမှာ Default Thread Subscription Mode အောက်က box လေးမှာ Instant Email Notification ဆိုတာလေးရွေးပေးရင်ရပါပြီ (ထင်တာပဲ)
စည်သူ့ကိုမေးတာ ကျွန်တော်ဝင်လျှာရှည်ထားပါတယ် :P
[email protected] ပေါ့နော်။
ကျနော့် gmail က [email protected] ပါ
ကျွန်တော်လည်း လိုချင်တယ်။ mglukyaw ဆိုတဲ့ login name နဲ့လုပ်ပေးပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :77: :77: :77:
[email protected] နဲ့ပါ.....:67:
gmail ကတော့အောက်မှာပါတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.....:101:
gmail ကတော့ [email protected] ပါ
ကျွန်တော် လဲ လုပ်ပေးတာကလွယ်ပါတယ်။ username တွေ ပြောပါ email တွေ ပြောပါ ဒါမှ ကျွန်တော် ပေးရလွယ်မှာပါ။ အဲ Real name ပါ ပြောပါ။ ကျွန်တော် မေးပြန်ပို့ ပေးပါ့မယ်။ Password တွေ ကိုတော့ Forum ပေါ်မှာမပေးချင်ဘူးဗျ။
အခုတောင်ထားတဲ့သူတွေ ကိုတော့ Forum ပေါ်မှာပဲ Tempory Password တွေ ပေးလိုက်မယ်။ အဲ့အခက်ခဲရှိတာတို့ အခြားသူတွေ ဝင်ပြီး ယူသွားတာတို့ဆိုရင်
ကျွန်တော့ ကိုပြောပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းပေးပါ့မယ်။
User account information for orbs 7:
• Your username is orbs.7 and your temporary password is 498Y06
• Your new email address is [email protected]
User account information for Mg Lu Kyaw:
• Your username is mglukyaw and your temporary password is 46S459
User account information for Kyaw Min:
вЂў Your username is kyawmin and your temporary password is 8901M5
вЂў Your new email address is [email protected]
User account information for Kong Su Lin:
вЂў Your username is kongsulin and your temporary password is T83109
User account information for mm kyioo:
вЂў Your username is mmkyioo and your temporary password is 574E00
User account information for always always:
вЂў Your username is always and your temporary password is 17D950
တားတားလည်း MZ ကိုမရောက်တာကြာလို့ခုမှသိရတာ။
ဒီ nick နဲ့လုပ်ပေးနော်..။ [email protected]
Gmail ကတော့ [email protected] ပါခင်ညာ။ မြန်မြန်လုပ်ပေးနော် ၊ တိလား။:D:P
အလကားရတဲ့နွား သွားဖြဲမကြည့်နဲ့ ဆိုတဲ့စကားပုံတယ်မှန်သကိုး။ :d
ကျွန်တော်များ နောက်ကျနေမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနေ့မှ အကုန်လုံးကို ၀င်ကြည့်လို့ရတာဗျာ။ ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ဟင်း....ဟင်း......။ ဒါနဲ့ တောင်းမယ့်ဟာကို မရောက်တော့ဘူး။ ဒီလိုဗျာ.... ကျွန်တော်လည်း အကောင့်တစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်။
လုပ်ပေးလို့ရဦးမလားမသိဘူး။ ရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ...။အချင်းချင်းမျက်ခြေမပြတ် ဆွေးနွေးနိုင်မှာ။
ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ kyawzinkoko ဆိုတဲ့ nick လေးနဲ့ဘဲ လုပ်ပေးပါဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ GMail က [email protected] ပါ။
ကျွန်တော်ကော ရနိုင်မလားမသိဘူး။ တောင်းမယ် တောင်းမယ်နဲ့ မတောင်းဖြစ်ဘူး။
MZ Mail= [email protected]
အလကား ရတိုင်း....လိုချင်တာတော့ ဟုတ်ပါဘူး....
လုလု လည်း MZ က..account တစ်ခုလောက် ရချင်လို့ပါ...
gmail က[email protected] .............
မင်မင် စည်သူ ကအခုတစ်လော ပျောက်ချင်းမလှပျောက်နေသောကြောင့် အကောင့်တွေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်
သူအစား တခြား မင်မင်တွေလုပ်ပေးမလားတော့မသိပါ
ရတာနောက်ကျရင် အမ်ဇက် လေးကိုခွင့်လွတ်ကျပါဗျား
ကိုယ်လည်း MZ Mail ယူချင်တယ်။ [email protected] လို့့ပဲ ယူပေးပါ။
အို...နောက်ကျလဲဘာအရေးလဲ......mz ကို စိတ်ဆိုးစရာမှ မဟုတ်တာ။ လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ တောင်းကြတာပါ။ စိတ်ဆိုးဘူး။ နော် ကိုစည်သူ.......ဟီး...ဟီး...၊ အခြား အက်ဒမင်တွေက လုပ်ပေးရင်တော့လည်း ကျေးဇူးထပ်တင်မှာပေါ့။ နော် မင် မင် တို့။
အားလုံးပဲ ကိုစည်သူ မိန်းမနောက်လိုက်ပြေးသွားပြီ။ အခု အီရတ်မှာ ပျားရည်စမ်း ခရီးထွက်နေလို့တဲ့။ ကျနော့ကိုမှာလိုက်တယ် ခဏလောက်စောင့်ကြပါအုံးတဲ့။:d
တိုစည်တူ ပြန်လာ ရင် mz member တွေ ရေခဲမှန့် စားရတော့ မှာပေါ့နော် ???:D
ဟီးဟီး စတာ စိတ် ဆိုရဘူးနော် :68:
ရေခဲ မှန့် မရ လဲ account ပဲတောင်း တော့မယ် ပေးမယ်လို မျှော် လင့်ပါ တယ်:D
အနော် က [email protected] နော် ။
gmail ကတော့ [email protected] .
အေးဗျ စည်သူကြီးဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။ အွန်လိုင်းမှာလဲမတွေ့ဘူး။ အပြင်မှာလဲမတွေ့တော့ဘူး။ uae များလိုက်သွားလေသလား??? လူပျောက်သွားတိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။:d:p:))
ဖြစ်နိုင်တယ် ဗျ အွန်လိုင်းထဲကနေ အာဘွားပေးတာ မကျေနပ်လို့ဖြစ်မယ် အီရတ် တော့မဟုတ်ဘူး ယူအေးအီးပဲဖြစ်မှာပါ
could you please open for me as [email protected]
my gmail is also the same.
အီရတ်ဆိုရင်တော့ ကျည်ခွံသွားကောက်တာ ဖြစ်မယ် ....
ကျွန်တော်လည်း လိုချင်တယ်ဗျာ။ [email protected] ပေါ့နော်။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း [email protected] ပါ နှစ်ခုထဲက ဘယ်ဟာကိုရရ ရပါတယ် မင်မင်တို့ရယ်။ ကိုစူသီကိုတော့ ပြောထားပြီးပါပြီ ။ gmail ပါပေးရမယ်ဆိုတော့ [email protected] ပါနော်။
ကျွန်တော့်ကိုလည်း ခုလောက်လုပ်ပေးပါ user name က တော့ [email protected] , G Mail က တော့ [email protected]
ကျွန်တော်လည်းလိုချင်လို့ပါ user name ကတော့ [email protected] , gmail ကတော့ [email protected] ပါခင်ဗျာ။
[email protected] နဲ့နော်
mail က [email protected] ပါ။
ဒီလိုပေးလားကိုစည်သူရ ကျွန်တော်ကမသိပါဘူး......မပေးဘူးထင်လို့ ဗျ....ဒါပေမဲ့ [email protected] ကိုတော့သိတယ်ဗျ ဒါ ဆို [email protected] ဆိုပြီးပေးနော်
User account information for ryan 3145:
• Your username is ryan3145 and your temporary password is 7662J9
•Start page - http://partnerpage.google.com/mysteryzillion.com
Print instructions Email instructions